मसाज सेन्टरमा यस्तो धन्दा, ३० मिनेटपछि युवतीले सोध्छिन् सर एक्स्ट्रा « हाम्रो ईकोनोमी
मसाज सेन्टरमा यस्तो धन्दा, ३० मिनेटपछि युवतीले सोध्छिन् सर एक्स्ट्रा
यहाँ मसाज गराईन्छ’ बोर्डमा लेखिएको हुन्छ । मसाज गराउनका निम्ति ग्राहक काउन्टरसम्म पुग्छन् । त्यसपछि महिला होस् या पुरुष स्वागतका निम्ति आउने गर्दछन् । पानी पिउन दिईन्छ । त्यसपछि सोध्ने गरिन्छ भन्नुहोस् सर कस्तो मसाज गर्ने ? थाई, स्वीडिश, डिप टिश्यू अर्थात् ट्रिगर आदि आदि । दर्जनौँ मसाजका विकल्प प्रस्तुत गरिन्छन् ।
महिला या युवती कसबाट मसाज गराउनु हुन्छ ? यो तपाईको ईच्छा । ग्राहक कोठामा जान्छन् । करिब ३० मिनेट बितेपछि मसाज गर्लले केही कुरा सोध्छिन् । त्यो सुनेर ग्राहक अक्कबक्क समेत पर्छन् । सर, एक्ट्रा सर्भिस के लिनुहुन्छ ? ग्राहकले कुनै प्रतिक्रिया जनायो भने शुरु हुन्छ, अवैध धन्दा ।
कोठामा नै तय गरिन्छ एक्ट्रा सर्भिस रेट
भारतको दिल्लीमा रहेका करिब ३४ वटा मसाज सेन्टरको रिपोर्टका आधारमा यो बिषय बाहिरिएको हो । जहाँ मसाज गर्ने महिलाले ग्राहकसँग एक्स्ट्रा रेटको तय गर्दछन् । एक मसाज गर्लका अनुसार एक्स्ट्रा मसाजका लागि एक जनाको २ हजारदेखि रेट तय हुने गर्दछ । यसमा दुवै पक्षको परामर्शका आधारमा रेट तय हुने गर्दछ ।
मसाज सेन्टरमा काम गर्ने युवती भन्छिन्, ‘एक्स्ट्रा रेट मसाज गर्ने बेला नै लिईन्छ ।’ पहिले अवैधधन्दामा संलग्नहरुमात्रै मसाज सेन्टरमा जान्थे अहिले कलेजमा पढ्ने युवतीको समेत आकर्षण बढेको छ । उनीहरु नाम चेन्ज गरेर त्यहाँ काम गर्छन् ।
पहिले–पहिले मसाज सेन्टरमा साहुले तलब दिन्थे अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । मसाज सेन्टरमा काम गर्ने महिलाले ग्राहक खोज्नुपर्ने हुन्छ । या आएको ग्राहकबाट एक्स्ट्रा मसाज लिनुपर्ने हुन्छ ।
कामना न्यूजबाट साभार गरिएको
आखिर के छ सन्नी लियोनको यो तस्विरमा, लाखौँ समर्थक क्षणभरमा झुम्मिए !
बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनको एक अवतारले सबैलाई हैरान बनाएको छ । उनी
चर्चित गायिका पवित्रा घर्तीकाे चाेली ढाकाले सार्वजनिक
चर्तित गायिका पवित्रा घर्ती मगर र बिबेकमान रोका मगरको आवाजमा रहेको नया
गत बर्ष इजिप्टमा आयोजित अन्तराष्ट्रिय ब्युटी एण्ड प्याजेन्ट शोमा ‘मिनी मोडल वल्ड
किशोरावस्थामा यौन सम्पर्क कति उचित कति अनुचित
महिला, परिवार तथा मानवअधिकार मन्त्री दमारेस एल्भिसले अघि सारेको यौनबाट अलग राखिने